Makumi matatu Eminyengetero Yegore Idzva 30 | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 30 minamato yeChinamato Chegore Idzva 2020
Pisarema 24: 7-10:
Simudzai misoro yenyu, iwo magedhi; uye musimudze, imi magonhi akare-kare; uye Mambo wokubwinya achapinda. 7 Ndianiko uyu Mambo wokubwinya? Iye ane simba uye ane simba, iye Jehovha ane simba pakurwa. Simudzai misoro yenyu, iwo magedhi; musimudze, imi magonhi akare-kare; uye Mambo wokubwinya uchauya. 8 Ndianiko uyu Mambo wokubwinya? Jehovha wehondo, ndiye Mambo wokubwinya. Selah.
Icho chinogara chiri chinhu chakanaka kutanga goredzva neminamato. Kana isu tikapa makore edu kuna Mwari, Iye anovimbisa kugona kwedu kwemashura mugore. Gore rega rega rine nhumbu yezvakanaka nezvakakura zvakaipa, saka isu tinofanirwa kunamatira kuti baba vedu vekudenga vatidzivirire kubva kune zvakaipa uye nekuunza zvakanaka kudzimba dzedu. Mwaka wega wega izere nezvisarudzo, tinofanira kunyengeterera mweya unoera kuti utibatsire kuita sarudzo dzakachena kutigonesa kubudirira mugore idzva. Chero gore rizere nemarudzi ese evanhu, isu tinofanira kunyengeterera kuti mweya unoera utitungamirire kune vanhu chaivo kuti tisvike kumusoro. Izvi zvese zvikonzero uye zvimwe ndezvekuti nei ndakanyora makumi matatu eminyengetero mapoinzi gore idzva 30.
Iyi minamato yeminamato ichaisa iwe panzira yekubudirira apo iwe uchivanamata. Kune avo chete vanozvininipisa zvakakwana ndokumbirawo kutungamira kunotungamirirwa naMwari. Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti muKristu anonamata haazombofi akave munyatwa waDhiabhori nevamiriri vake. Saka paunotanga gore rako neminamato, ngirozi dzaIshe dzinoenda pamberi pako mukati megore uye dzikisa nzira dzese dzakakombama munzira yaJesu. Ndiri kuona iyi minamato yemwaka mutsva inounza iwe kubudirira kukuru muzita raJesu.
1. Baba, ndinokutendai nekunaka kwako uye nemabasa anoshamisa muhupenyu hwako mugore ra2019.
2. O Ishe, pedzai zvinhu zvakanaka zvese zvakanangana neni gore rino 2020.
3. Mwari ngaave Mwari muhupenyu hwangu gore rino 2020, muzita raJesu.
4. Mwari ngavasimuke vanyadzise simba rese rakanetsa Mwari muhupenyu hwangu gore rino 2020 muzita raJesu.
5. Rega kusuwa kwangu kese kuve kugadzwa kwehumwari muhupenyu hwangu gore rino muzita raJesu.
6. Mhepo dzose dzaSatani nemadutu ngazvinyaradzwe muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
7. Iwe Mwari wekutanga mutsva, tanga chidimbu chitsva chezvishamiso muhupenyu hwangu gore rino, muzita raJesu.
8. Rega izvo zvinonditadzisa kubva mukukudzwa zvipazwe zvidimbu, muzita raJesu.
9. Wese ma anti-anoputsa maburi akagadzirirwa kundirwisa ngaaparadzwe, muzita raJesu.
10. Regedza kuzodzwa kwemweya kunowira pandiri, muzita raJesu.
11. Ishe, ndisunungurei kunzvimbo yakakodzera panguva chaiyo.
12. Iwe Mwari wekutanga mutsva, vhura kwandiri mikova yekubudirira kwandiri, muzita raJesu.
13. O Ishe, ndipeiwo mazano akazodzwa uye munditungamirire kunzira itsva dzemakomborero, muzita raJesu.
14. Rega makore angu ese apera nekuedza ngavadzoserwe kudzokere makomborero mazhinji, muzita raJesu.
15.Mari dzangu hadzizopinde munhanga dzenzara dzemari gore rino, muzita raJesu.
16. Ini ndinoramba mweya yega yega yekunyadziswa mune zvemari, muzita raJesu.
17. O Ishe, buritsa uchi mudombo kwandiri uye ndiwane nzira iyo varume vanoti hapana nzira.
18. Ini ndinotaura pasina uye ndinoshayisa mazwi ese akaipa andakataura pamusoro pehupenyu hwangu, imba, basa, nezvimwe, kubva pasatani zvinyorwa, muzita raJesu.
19. Iri gore rino, ini handisi kukanda mapfumo pasi nezvishamiso zvangu, muzita raJesu.
20. Vagadziri vese vekuvenga, kuvengana uye kukakavara mumba ngavafe mitezo, muzita raJesu.
21. Ini ndinoraira satanic yose yekuganhurira kune hutano hwangu uye mari kuti ibviswe, muzita raJesu.
22. Tendera zvese zvatakapiwa nhaka kuti tiwane zvakanaka zvinhu zvibve, muzita raJesu.
23 Haiwa Ishe, simuka, munyadzise simba rose rinopikisa Mwari wangu.
24. Nezita raJesu, rega ibvi rimwe nerimwe rebvi rekunyadzisa satan.
25. Ini ndinoramba kudya chingwa chekusuwa gore rino, muzita raJesu.
26. Ini ndinoparadza kushora kwese kwemweya muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
27. Rega mhepo yekuMabvazuva itore simba uye kunyadzise vese vekunamata vangu vanaFarao nemuEjipita, muzita raJesu.
28. Ita chimwe chinhu muhupenyu hwangu mune ino yemunamato chikamu chinoshandura hupenyu hwangu kuti huve hwakanaka, muzita raJesu.
29. Ishe, ndinunurei kubva kune zvakaipa zvese gore rino idzva muzita raJesu.
30. Handisi kuzokumbira mari kana chero chinhuzve mwedzi uno muzita raJesu
Ndatenda nekupindura minamato.
Previous nyaya40 Mharidzo dzeMunyori Kupesana nedzvinyiriro.
inoteveraPfungwa dzeMunamato PaKunyarara Vanogumburisa
Charles Zvita 31, 2018 At 6:10 am
Augustus T. Seongbae, ll Ndira 8, 2019 At 3:11 am
Ini ndiri mufundisi Seongbae anobva kuLiberia, ndinotenda neminamato yenyu yakagadzirirwa pamweya. Hushumiri hwangu hunovabatsira.
Mufundisi Ikechukwu Chinedum Ndira 8, 2019 At 4:02 am
Mwari vakuropafadze mufundisi, Mwari ngavabudirire shumiro yako uye vaponese mamirioni emweya kuburikidza newe. Muzita raJesu.
Nesimba Okechukwu Ndira 8, 2019 At 6:25 am
Ndatenda zvikuru changamire .. Muzita raJesu, ndinobvisa kubva pakuzodzwa kwako kweukuru gore rino 2019 .. Nemunamato uyu, iwo magonhi epedyo ehupfumi, hukuru, kukunda kunovhurwa kuti ndigare mukati.
Mufundisi Ikechukwu Chinedum Ndira 8, 2019 At 8:17 am
Ishe Kudza iwe Sir, Muzita raJesu.
Ben olie Ndira 15, 2019 At 6:51 pm
Ndinokutendai nekuda kwemasimba ako ose ekunamata munamato ini ndakasarudzika Mukuru Ben olie anobva kuNigeria
Mufundisi Ikechukwu Chinedum Ndira 15, 2019 At 8:59 pm
Ishe vanokudza Changamire.
Mufundisi ataura w Boulner Ndira 17, 2019 At 11:21 pm
Vakazodzwa vaMwari ini ndinokomborera kubva pazvombo zvemweya izvi, ndiri mufundisi wechikadzi anobva kuLiberia ndichishuvira kuona kufamba kwaMwari muHupenyu hwangu hushumiri hwedu hwabatsirwa kubva kunamato idzi uye isu tine nzara yezvakawanda Mwari ngaakuwedzerei imi Sir. Ndatenda.
Mufundisi Ikechukwu Chinedum Ndira 18, 2019 At 12:06 am
Mwari vakuropafadze mufundisi, uchaona zviito zvisirizvo muhushumiri hwako gore rino idzva.
Mufundisi P Zvita 25, 2019 At 4:16 am
Wakazodzwa naMWARI im muSwaziland uye mufundisi, mai imi makakomborerwa zvakawandisa man of God zvechokwadi imi muri kuburitsa zvombo zvakawandisa kuti satan arege kuramba.we tiri kukunda nyika kuna Jesu Kristu amen
Idiongo Akpanukoh Ndira 6, 2020 At 6:28 am
Pindura: Ndatenda Mufundisi wangu anodikanwa nekupa iwo manamato emunyengeri ayo ini ndawana anoshanda kwazvo uye sosi yehupenyu hwangu. Tenzi wedu akanaka ngaarambe achishandisa imi nesimba pabasa Rake reHumambo, Ameni.
Seun Ndira 10, 2020 At 7:39 pm
Lukonga Kukadzi 26, 2020 At 9:48 pm
Ndatenda nekuda kweminamato yekunamatira, dai Mwari wemasimba ose vakuropafadza kwazvo nebasa rako munaJesu Kristu.
alfred christana Kurume 7, 2020 At 11:01 pm
Munhu wa Mwari ndinokutendai changamire Ishe vakuropafadzei zvikuru changamire
hove Kukadzi 16, 2021 At 8:59 am
Hondo Minamato Yekuparadza Hondo Dzemweya Yechisimba
Maitiro Ekutaura Munamato Unobudirira
107 Hondo dzeMweya minamato Yekukunda Vavengi Vako
Kunamata Kunongedzera Kunonoka